Maamulka gobolka Banaadir oo digniin u diray gaadiidka la baxsada canshuurta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta soo saaray amarro cusub, isagoo sidoo kalana dib usoo nooleeyey amarro hore hase ahaatee aan u dhaqan gelin sidii loo rabay.
Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo shir guddoominayay kulankii todobaadlahaa ahaa ee ay yeeshaan maamulka Gobolka, ayna ka qeybgaleen guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka, nadaafadda iyo arrimo kale.
Shirka ayaa intii uu socday waxa uu guddoomiyaha gobolka warbixinno ka dhageystay qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha Gobolka, iyadoo intii uu socday shirka arrimo badan oo xagga amniga iyo bilic soo celinta la isku waydaarsaday, waxaana laga soo saaray qodobada soo socda.
1) Cidii lagu qabto isagoo falal amni darro ah geysanaya, islamarkaana lagu caddeeyo waxaa si deg deg ah oo aan daah laheyn loo horgeynayaa sharciga.
2) Gawaarida aada Ex-koontrol Afgooye ee ka dhuunta canshuurta kadibna mara Deyniile looma ogala in ay maraan degmadaasi, iyadoo gaarigii lagu qabtaa in uu ku dhaqaaqay arrinkaasi sharciga la marsiin doono.
3) Bacaha qashinka ku jiro lama soo dhigi karo waddooyinka Magaalada, cidii soo dhigtana sharciga ayaa la marsiinayaa.
4) Sadex maalmood ayey heestaan kawaanada ku yaalla degmooyinka Gobolka Banaadir, waana inay u guuraan kawaanka weyn xoola qalka ee Kawaan Bari.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa horay usoo saarray amarro ay ka mid yihiin inaan bacaha qashinka la dhigi Karin hareeraha waddooyinka iyo xoolaha lagu qalo Kawaan bari oo kaliya, hase ahaatee amarradaa si buuxda uma dhaqangelin.
Somalia: State Minister for Foreign Affair Burci Hamza Appreciates Ethiopia’s AMISOM Role